Hanni bu’uurale misooma elektiriki irratti raawwatu dhiibba uumuun himame – Fana Broadcasting Corporate
Hanni bu’uurale misooma elektiriki irratti raawwatu dhiibba uumuun himame
Finfinnee, Fulbaana 28, 2012 (FBC) – Hanni bu’uurale misooma elektiriki irratti raawwatu hojii waliingahinsa elektriki guddisuuf hojjetamu irratti dhiibba uumuun himame.
Qabeenyi mootummaa fi ummata guddaan itti bahe, sarafa alaa guddaan bitame tajaajjila kennuu irratti kan argamu bu’uraaleen misooma elektiriki namoota itti gaafatamummaan itti hir’atuun hatamaa fi balaa irra ga’aa kan jiru ta’u tajaajjilli elektiriki Ityoophiyaa beeksiseera.
Dhaabbatichi sababa dulloomu bu’uraale misooma elektirikiin wal qabate ciccituu annisaa fi raafamu ujjummoo furuu fi waliinga’insa elektirikii guddisuu hojjechaa akka jiru ibseera.
Haata’uti hanni bu’uraale misooma elektirikii irratti raawwatamaa jiru rakkinoota kana furuu irratti miidhaa biraa ta’ee argameera.
Hawaasni hundu miidhaa bu’uuralee misooma elektirikii irra ga’u eeguu fi kunuunsu akka qabu dhaabbatichi hubachiiseera.
Kana irra kan darbe, hojjettoonni dhaabbaticha suphaa fi hojiiwwaan hojjechuuf yeroo socho’anitti wraaqaa eenyumaa hojjetaa waajiraa ta’u ibsu fi xalayaa ajaja hojii dhaabbatichaa qabaachun hawaasni mirkaneessu akka qabanii fi namoota hojjetaa dhaabbatichaa fakkaachuun hanna raawwataan ammoa hawwasni ittiisuu akka qabu dhaabbatichi hubachiseera.